Archive du 20190112
Fianianan-dRajoelina Tsy hisy fivavahana, tsy hisy baiboly
Amin'ny fomba repoblikanina no hanatontosana ny fianianana izay hatao ny 19 janoary ho avy izao. Tsy hisy baiboly na boky inona na boky inona fa dia hianiana eo fotsiny ny filoha vaovao, raha araka ny loharanom-baovao mivoaka.
Ntsay Christian Mbola tsara toerana ho praiminisitra…
Afaka herinandro katroka anio, izany hoe ny sabotsy 19 janoary no hanatanterahana ny lanonam-pitsarana lehibe ho fianianan’ny filoha vaovao Andry Nirina Rajoelina, ary ny harivan’io no hotanterahina ny famindram-pahefana eo aminy sy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina.
Fikambanana Olona Hasin’ny Tany Nankasitraka ny fihetsik’ireo kandida roa
Nifampiarahaba noho ny fahatrarana ny taona vaovao teny amin’ny Le Pavé Antaninarenina ny Fikambanana Olona Hasin’ny Tany (OHT) omaly tolakandro.
Fitantanan-draharaham-panjakana Ahiana hiverina ny gaboraraka
Tafiditra ao anatin’ny Repoblika fahefatra tapany faharoa isika amin‘izao fotoana. Raha ny tapany voalohany no hanaovana jery todika, vanim-potoana tena nanjakan’ny gaboraraka sy ny tsy fahaiza-mitantana nandritra ny dimy taona naharetan’ny tetezamita.
Boriborintany faha-5 Mpikamban’ny K25 kotrehina hogadraina
Olona miisa 7 no nosamborina teny amin’ny Boriboriborintany faha-5 omaly zoma 11 janoary vao maraina ary nalefa avy hatrany teny amin’ny fampanoavana.
Fanemorana ny fifidianana depiote Ahiana ho mifono politika maloto
Nambaran’i Andry Rajoelina tamin’izy nilaza tamin’ny fomba ofisialy amin’ny hilatsahan-kofidiana ho filoha ny 1 aogositra 2018 fa hofoanany ny antenimierandoholona.
Vina IEM Fanatanterahana haingam-pandeha no tena ilaina
Mila miasa avy hatrany ary miasa haingana ny filoham-pirenena vaovao amin’ny fanatanterahana ireo velirano ao anatin’ny vina IEM, hoy ny dokotera Jean Louis Robinson.
Taitra be aho ry Jean nahita ilay filaharana kodiarana maromaro mitovy loha teo am-piasanao omaly iny an ! Tonga ny tramway, hoy aho.
Ligin’ny baolina kitra any V7V Hanomboka anio ny tompondakan’ny seksiona Manakara
Araka ny vaovao nampitaina teo amin’ny Tia Tanindrazana dia hanomboka amin’ny zoma 15 febroary 2019 izao ka hifarana amin’ny
Minisiteran’ny tanora sy fanatanjahantena Malagasy Vita omaly teny Ivato ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2019
Tao anatin’ny lanonana fifampiarahabana nifanaovan’ny fianakaviamben’ny minisiteran'ny Tanora sy Fanatanjahantena Malagasy sy ny mpisehatra rehetra eo anivon’ny minisitera (ny mpiara-miasa, ny mpiara miombon'antoka, ny tanora, ny atleta, ny Federasiona, ny antanatohatra rehetra...) teny amin’ny A & C Ivato,